Wasaaradda Arrimaha Gudaha Oo Diiwaan Gelinaysa Ardayda Dugsiyadda Hargeysa Ku Yaala Wax Ka Barta | Burconews
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Oo Diiwaan Gelinaysa Ardayda Dugsiyadda Hargeysa Ku Yaala Wax Ka Barta
November 13, 2019 - Written by Admin
Wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Md.Cabdinaasir Caydiid Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Md.Axmed Abokor Maxamed iyo xoghaya dawladda hoose ee Hargaysa Md.Axmed Yoonis Aadan (juxa), xildhibaano ka ka tirsan golaha deegaanka caasimada Hargaysa iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland.
Kulankan ayaa lagaga arrinsanayey, sidii wasaaradda arrimaha gudaha JSL u diwaangelin lahayd ardeyda wax ka barata dugsiyada caasimada caasimada Hargaysa iyo sodii loo siin lahaa shahaadada dhalashada taas oo ay u xilsaaran tahay dawlada hoose ee Hargaysa.
Wasiir kuxigeenka arrimaha gudaha Md.Cabdinaasir Caydiid Maxamed oo kulankan soo qabanqaabiyey, ayaa faah’faahin ka bixiyey ujeedada ka danbaysa diwaangelinta ardeyda iyo bixinta shahaadada dhalashada (Taysarada).
Waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; Maadaama oo ay wasaaradda arrimaha guduhu u xilsaaran tahay, bixinta kaadhka muwaadinka reer somaliland iyo shahaadada dhalashada oo ay dawladaha hoose ee dalku wakiil uga tahay bixinteeda ayaa waxa wasaarad ahaan muhiim nala noqotay, markii aan muddo badan lafagurnay, in aan diwaangelin ku samayno ardeyda dugsiyada dalka annaga oo kaashanayna hay’adaha dawliga ah ee ay arrintani naga dhaxayso. Hadda waxan ku bilaabaynaa ardeyda dugsiyada gobolka M/jeex.
Sidaa awgeed, waxan maanta xafiiskayga iskugu yeedhay dhammaan masuuliyiinta hay’adaha dawliga ah ee ay arrintani khusayso oo ay ka mid yihiin; wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo dawlada hoose ee caasimada hargaysa.
Falanqayn iyo lafagur dheer ka bacdi waxan masuuliyiintan, isla qaadanay, in aan ku dhaqaaqno fulinta hawshan qaranka muhiimada balaadhan ugu fadhida.
Sidaa darteed, waxan maanta xog-hayaha dawlada hoose ee magaalada Hargaysa Md.Axmed Yoonis Aadan (Juxa) ku wareejinaynaa, shahaadooyinka dhalashada, si ay ardeydu u siiyaan, ka dibna wasaaradda arrimaha guduhu u diwaangeliso oo ay u qaataan kaadhka dhalashada muwaadinka Somaliland.
Dhanka kale, wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Md.Cabdinaasir Caydiid Maxamed oo ka hadlayey faa’iidooyinka ka dhalan karta talaabadan ay ardeyda ugu samaynayaan diwaangelinta iyo shahaadada dhalashada ayaa sheegay, in arrintan ay ka dhalan doonto ammniga oo la sugo iyo in ardeyga helo dhammaan dhokomintiyada sharciga muwaadinka oo u sahli kara in si sahal ah lagu aqoonsan karo.
Sidoo kale, waxay arrintani sahlaysaa, in si fudud loo kala garan karo qofka muwaadinka ah iyo ruuxa ajaanibka ah. Sidaa darteed, waxan dhammaan waalidiinta iyo hay’adaha dawliga ah ee ay khusayso u soo jeedinaynaa, in ay nagala shaqeeyaan sidii arrintani u hirgeli lahayd.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Md.Axmed Abokor Maxamed ayaa isaguna dhankiisa sheegay, in ay arrintan ay soo dhaweynayaan, Waxaanu balanqaaday, in wasaarad ahaan ay kala shaqayn doonaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawlada hoose ee hargaysa.
Xog-hayaha dawlada hoose ee hargaysa Md.Axmed Yoonis Aadan (Juxa) oo isaguna munaasibadaa ka hadlay ayaa xusay, in arrintani muhiim u tahay qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaanu sheegay, in ay dawlad hoose ahaan ay arrintaa dedaal badan gelin doonaan sidii ay u hirgelin lahaayeen.